Bukhara, Bukhara Region, i-Uzbekistan
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Sadullo
Amakamelo amabili amahle, anethezekile futhi ahlanzekile. Itholakala kahle eduze kwesikwele esikhulu seLabi House, eduze nezindawo zokudlela nezitolo. Amakamelo akhanyayo, anomoya opholile ahlotshiswe ngendlela yendabuko yase-Uzbek futhi ahlotshiswe ngokugqamile. Ikamelo ngalinye linokhaphethi waphansi, i-TV, isimo somoya, ideski lomsebenzi kanye nendlu yokugezela yangasese enomshini wokomisa izinwele. I-Hyper-speed Wi-Fi iyatholakala.
I-Guest House "Umlando" ingomunye wabahlinzeki abadumile bokungenisa izihambi komlando e-Bukhara. Siyaziqhenya ngokusiza izivakashi zethu nokwenza uhambo lwazo lube nenjongo. Izinsizakalo zethu zihlanganisa ukuhlinzeka ngamafulethi ukuze uthole indawo yokuhlala, ukuphelezela izivakashi zethu esizeni, ukuhlinzeka ngokudla ngesikhathi zihleli nathi, ukusiza izivakashi zethu ngezokuthutha, ukushintshanisa imali, ukupaka, ukuzijabulisa.
I-History Guest House itholakala maphakathi ne-Bukhara, amamitha ambalwa nje ukusuka endaweni edumile yomlando yomthombo we-Lyabi-House. Itholakala kahle eduze kwesikwele esikhulu seLabi House, eduze nezindawo zokudlela nezitolo.
Itholakala kahle nje eduze kwesikwele esikhulu seLabi House eduze nezindawo zokudlela nezitolo. IBukhara International Airport ikude nge-3.1 ml. Lesi sakhiwo futhi sinenye yezindawo ezikalwe phezulu eBukhara ku-booking.com! Umakhelwane unomlando weminyaka engaphezu kuka-2000 ngokocwaningo lwenhlangano ye-UNESCO. Zonke izindawo zomlando eziseduze nebanga lokuhamba ngezinyawo. Isitobhi sebhasi, ongafika kuso kuzo zonke izindawo ezibukwayo zase-Bukhara yasendulo, uhambo lweminithi elingu-1 ukusuka endlini yezivakashi "Umlando". I-Bukhara International Airport itholakala ku-3.1 ml. Lesi sakhiwo sinenye yezindawo ezinhle kakhulu eBukhara!
Indawo yokwamukela i-History Hotel ivuliwe amahora angu-24 ngosuku. Indlu yezivakashi inabasebenzi abakhuluma isiNgisi abanobungane nabawusizo abazokujabulela ukuhlinzeka izivakashi ngolwazi olusebenzayo mayelana nendawo phakathi namahora angu-24.
Indawo yokwamukela i-History Hotel ivuliwe amahora angu-24 ngosuku. Indlu yezivakashi inabasebenzi abakhuluma isiNgisi abanobungane nabawusizo abazokujabulela ukuhlinzeka izivakash…
Hlola ezinye izinketho ezise- Bukhara namaphethelo